Xiaomi ga-ebuputa igwe onyonyo abuo di elu na igwe onyonyo na-emeghari | Gam akporosis
Eji, retractable ma ọ bụ mmapụta ese foto bụ ihe dị nnọọ Nde na gam akporo. N’ọnwa ndị a, anyị enweela ike ịhụ etu ụdị dị iche iche siri hapụ anyị nwere ama nke ụdị a. Anyị ahụla ụdị dị ka ndị OPPO Reno ma ọ bụ Vivo s1, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọtụtụ ụdị na-arụkwa ọrụ na ekwentị nke ụdị a, dị ka ọ dị ugbu a na Xiaomi.
Ugbu a, akara ndị China na-emepe emepe ekwentị abụọ maka njedebe ya dị elu. Modelsdị abụọ nke kwụpụtara maka iji igwefoto a na-eme ihe. Ọ bụ ezie na ha apụtaghị na ha bụ Redmi na leaked a izu ole na ole gara aga. Yabụ ihe niile na-egosi na a ga-ebupụta ha n'okpuru akara Xiaomi na nke a.
Ruo ugbu a enwere nkọwa ole na ole gbasara ekwentị Xiaomi abụọ a. Ihe amara bụ na ekwentị abụọ ahụ ga-enwe Snapdragon 855 dị ka ihe nhazi. N'ihi ya, o doro anya na ndị a bụ abụọ n'elu nke elu ugwu. Ma ewezuga nke a, enweghị nkọwapụta nkọwapụta banyere ha agbanyebeghị.
Dị ka koodu aha maka ha, akara ndị China ejirila Raphael na Davinci na nke a. Igwefoto igwefoto na ngwaọrụ abụọ a na-atụ anya ịbụ igwe. Nke a pụtara na ndị ọrụ agaghị arụ ọrụ ya aka, dịka ọ na-eme na atụ na MI MIX 3.
N'echiche a, ihe niile na-egosi na ekwentị abụọ ahụ ga-arụ ọrụ n'okpuru akara Xiaomi. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume otu bụrụ maka Pocophone, nke kwesiri ịmalite ọgbọ nke abụọ n'afọ a. Ebe ọ bụ na nso nso a gosipụtara na ọkwa dị elu nke Redmi ọ gaghị enwe igwefoto na-eme mmịfe.
Enwebeghị nkọwa ọ bụla gbasara ngwaọrụ ndị a ekpughere ruo ugbu a. Xiaomi n'onwe ya ekwughi ihe obula banyere ha.. Anyị nwere ike ịnwe ozi ndị ọzọ gbasara ụdị ọhụụ ọhụrụ a n'oge na-adịghị anya. Anyị na-atụ anya inwe ha, n'ihi na o doro anya na ihe mmịfe na-ewu ewu taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi ga - ebido igwe okwu eji eme ihe n’abia
Etu esi ebupụ nkata Telegram na WhatsApp